Kedu ka m ga esi edozi njehie RuntimeBroker exe? - Njehie
Isi > Njehie > Runtimebroker.exe ngwa njehie - ahụkarị azịza na ajụjụ
Runtimebroker.exe ngwa njehie - ahụkarị azịza na ajụjụ
Kedu ka m ga esi edozi njehie RuntimeBroker exe?
IdozikaOge ezumikeBroker.exe Njehiena Windows 10
Mepee Task Manager gị na ịnyagharịa usoro.
Lebe anyaOge ezumike Brokersite na ndepụta nke usoro na-agba ọsọ.
Ozugbo achọtara, pịa nri na ya wee pịa ọrụ Ọgwụgwụ.
Reboot PC gị ozugbo usoro emechiri.
Ndewo onye ọ bụla, kedu ka ị mere, MDTech nọ ebe a na nkuzi ọzọ ngwa ngwa taa aga m eche echiche banyere otu m ga-esi nwee olile anya idozi ụfọdụ nsogbu mmalite ị nwere na Windows 10 yabụ enwere ike ịnwe nsogbu dịgasị iche iche bụ nsogbu mmalite na na-eme ihe n'eziokwu emeela m nkuzi ole na ole emeelarị ụzọ dị iche iche ị nwere ike ịnwale iji weghachite Windows 10, yabụ ka anyị chee na ị nweghị ike ịba n'ime Windows 10 yana na ị na-ajụkarị na ị ga-eji aka gbanyụọ gị ngwaọrụ site na ịpị bọtịnụ ike na kọmputa gị ruo mgbe kọmputa gị gbanyụrụ.
Na Windows 10, mgbe emechara ụzọ mmechi atọ nke emezuru n’ụzọ na-ezighi ezi, a na-anwa ịmalite ngwa nrụzi akpaka anyị nọ na ya ugbu a. Buru nke ahụ n'uche, nke a anaghị achọkwa nbudata CD ma ọ bụ DVD ọzọ, enweghị faịlụ ISO, ọ nweghị ihe ọ bụla, yabụ nke a wuru n'ime Windows ma rụọ ọrụ dị ka ngwaọrụ mgbake maka kọmputa gị ka ị wee nwee mmeghe na-asị PC gị agaghị amalite nke ọma. Pịa Malitegharịa ekwentị ka ịmalitegharịa PC gị nke nwere ike idozi nsogbu ahụ mgbe ụfọdụ.
Na nke anyị, o doro anya na ọ bụghị, mana anyị nwere ike ịhụ ebe a na ị nwekwara ike pịa Nhọrọ dị elu iji gbalịa nhọrọ ndị ọzọ maka ịrụzi PC gị, n'oge a pịa aka ekpe Advanced Options bọtịnụ gaa n'aka nri nke otu Reboot ka nke a kwesịrị ịbụ nhọrọ ziri ezi. Họrọ otu nhọrọ dị n'okpuru, aka ekpe pịa na Nchọpụta nsogbu. Ugbu a, enwere nhọrọ Nhọrọ di elu n'okpuru windo nchọpụta nsogbu.
Ugbu a, e nwere ụzọ dị iche iche anyị ga-esi gafere na nkuzi a. Nke mbu bu sistemaghachi a choro ka ichoputa ihe aka ekpe n’elu ya ka ị nweta obere igbe okwu nke kwuru sistemu weghachite nwere ike inye aka dozie nsogbu nwere ike ime ka komputa gi jiri nwayọ nwayọ ma obu kwusi iza ya, ihe weghachite na emetuta. , eserese, ma ọ bụ ozi nkeonwe ndị ọzọ arụnyere na Nchekwa Ọnọdụ n'oge na-adịbeghị anya wee gbalịa ịwụnye usoro ihe omume ahụ ma ọ bụ ihe ọ bụla ị nwere ike ime iji dozie ihe ọ bụla ị maara ama mere mgbe ọtụtụ n'ime gị amaghị ihe kpatara nke a, onye na-esote gị ga-ahọrọ ọtụtụ ị nwere ike ịhọrọ ebe dị iche iche eweghachiri na listi ndepụta a ka m wee nwee ike ịkwado nkwado maka weghachi ihe ewepụtara n'oge na-adịbeghị anya wee laghachi ebe ahụ, mana m ga-anwa ime ihe ọhụrụ ahụ na mbụ ọ dị ka nke na-esote, nke a ga - egosi naanị na ị na - agbake timestamp ahụ na nke kọmputa mbanye metụtara ma biko buru nke a n'uche ma ọ bụrụ na ị gbanwere paswọọdụ windo gị n'oge na-adịbeghị anya, nwee ike ịkwado anyị m na-agwa gị ka ịmepụta okwuntughe nrụpụta disk, yabụ buru n'uche nke a tupu ịme nke a wee pịa pịa n'isi. Ọ bụrụ n’ịchọrọ ịga n’ihu, biko cheta na ị naghị egbochi sistemụ weghachi ozugbo ọ malitere.
Họrọ EE ebe a na nke a ga-amalite usoro weghachite initialization rightback okay ka anyị wee nwee ike ịhụ na weghachite sistemụ mechara nke ọma ma anyị nwere ike ịhụ ụbọchị na oge nke weghachite - ebe ahụ abụghị akwụkwọ anyị mana na N'ezie, pịa anyị na-amalite ịzụta ịmalitegharịa kọmputa gị, yabụ ọ bụrụ na ọ bụ n'ihi ihe ụfọdụ, ị nweghị ike ibata n'ime Windows 10, ka anyị laghachi na menu nchọpụta nsogbu maka ụnụ bụ ndị nke a na-arụghị ọrụ. Ọ dị mma ọzọ n'okpuru nrụzi akpaaka, họrọ Advanced Options ma ị nwere nhọrọ ahọpụtara, họrọ Nchọpụta nsogbu n'okpuru Nchọpụta nsogbu na-esote Advanced Options, oge a họrọ nhọrọ aka ekpe dị ala nke na-ekwu na mmezi mmalite ga-edozi nsogbu ndị na-egbochi Windows ibugo. Ekpe Pịa ya iji mee ka ọ were obere oge iji gbaa ọsọ.
microsoft Outlook eme nzuzu
Ngwaọrụ a dị mma akpaka, yabụ kwesịrị iji ya si ebe a. Mgbe emechara ya naanị ịmalitegharịa kọmpụta gị iji hụ ma kọmputa gị nwere ike ịbido Windows ugbu a, ọ bụrụ na ọ bụghị mgbe ahụ enwere m usoro ọzọ anyị nwere ike ịnwale ma ọ ga-agụnye ịlaghachi na menu nchọpụta nsogbu anyị ga-aga ugbu a. maka onye ọ bụla, yabụ na-eche na nke a arụghị ọrụ, nhọrọ nke atọ na nke ikpeazụ anyị taa ga-ahọpụta nhọrọ dị elu site na iwu ozugbo ka ị ga-ahapụ pịa bọtịnụ OK. Ihe mbụ anyị kwesịrị ime bụ itinye isi draịvụ ike anyị ebe a, n'ọtụtụ oge ọ ga-abụ C mbanye, yabụ mee Ccolon wee pịa Tinye na keyboard gị, pịnye dir wee pịa igodo ntinye na keyboard gị.
Ọ kwesịrị ịnwe faịlụ mmemme maka ndị ọrụ na windo. Mee ka anyi mara na ino na ndetu ahihia. N'ọnọdụ ụfọdụ, ọ nwekwara ike ịbụ D draịva, na ụdị ohere CD ụdị Ford / Windows Ford / System 32Ford / config wee pịa Tinye na keyboard gị ugbu a pịnye MD spaceback p ma ọ bụrụ na ị hụla nkuzi ndị ọzọ Ọzọkwa, ị nwere ike ịsị gị I kwesiri idobe ya ma kwado ya n'ihi na aha nkwado ndabere adighi nma mgbe ichoro ihe ka ichota ihe a ichoro igha na nchekwa ulo n’oge gara aga, inwere ike iga Examma atu ike a ndabere
ekpughe akwụkwọ ọrụ onwe onye
Yabụ mgbe itinyere aha ịchọrọ ka nkwado ndabere na-akpọ ọzọ, pịa Tinye na keyboard gị ọzọ. N’ebe a ịchọrọ idetuo na idetuo akara ngosi kpakpando di n’elu isi e ma mee oge ma obu ihe obula ichoro ikpo ya, ozo zodiac ozo ozo ohere ozo wee puta azu ma pinye igodo ntinye na keyboard ugbu a ị chọrọ pịnye cd 'reg azụ re G Azụ wee pịa tinye na keyboard gị ugbu a na anyị nọ n'okpuru reg azụ yabụ ugbu a ị chọrọ pịnye dir ọzọ wee pịa tinye. Ugbu a n'oge a, anyị ga-e copyomi ọzọ, ya mere detuo ohere ZodiacDon ohere zodiac ọzọ wee tinye ntụpọ abụọ ka anyị wee detuo oghere Zodiac Tinye ebe Zodiac s ign dot Don wee pịa Tinye ọzọ na keyboard gị ka ị gafee overwrite chọrọ overwrite ihe niile.
Yabụ, pịnye a na keyboard gị wee pịa Tinye na keyboard gị. N'oge a ị kwesịrị ị dị mma, ị nwere ike imechi windo iwu ngwa ngwa ma ọ bụrụ na ị nwere ihe mberede na oge Windows 10 ha niile kwesịrị ịtọ, yabụ enwere m olileanya na otu n'ime ụzọ atọ a ma ọ bụ anọ a anyị gafere na nkuzi a. Nụ ole na ole site na gị ọzọ nyeere gị aka, mana ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume ị na-anwa ịlaghachi na Ọnọdụ Nchekwa gị ma wepu mmemme niile ị maara? ga-enwe nsogbu na mmalite Windows ma ọ bụrụ na ịnwere ike ịbanye na Ọnọdụ Nchekwa, yabụ buru n'uche na ihe dị mfe dịka nke a nwere ike igbochi ihe niile. Echere m na nkuzi a enyerela m aka, m ga - ejide gị nke ọma na nkuzi ọzọ
Kedu ihe eji eme RuntimeBroker EXE maka?
Oge ezumikeBroker.exebụ usoro Microsoft dị nchebe gụnyere Windows 8 na Windows 10 iji nyere aka na ikikere ngwà. Ọ nwere akara usoro usoro ọkụ, na-eji ihe na-erughị 3,000 k nke RAM. Gaghị ahụ arụmọrụ sitere na usoro a na-aga n'okirikiri.Sep 25 2020
Ọbụna ma ọ bụrụ na ị na-eji Windows ruo mgbe ebighi ebi, enwere ike ị nwere ọtụtụ ntọala ị na-ahụghị na ndabara na ọ ga-abụrịrị na ị ga-agbanwe.
Ndị a nwere ike ịbụ ntọala maka nzuzo, ịdị mma, ma ọ bụ naanị ịba uru na mkpokọta.M ga-agabiga ọtụtụ ntọala na Windows, ọkachasị Windows 10, na echere m na ị kwesịrị ịgbanwe ozugbo, gụnyere ihe ndị ị kwesịrị ịgbanyụ yana atụmatụ nke dị mma ma ọ bụghị na ndabara enwere ihe dị ka 15 n'ime ndị a wee nwee olile anya na ị ga-amụta opekata mpe ndị ọhụrụ. Anyị agaba.
dism agaghị agba ọsọ
Nke mbụ, ka anyị gaa Ntọala Nwelite Windows. Iji banye na windo ntọala isi, dị nnọọ pịa menu mmalite, wee pịa Gear, gaa Nwelite & nchebe wee chọọ 'Advanced options'.
Kedu ka m ga-esi wepu RuntimeBroker EXE?
Ijiwepu RuntimeBroker.exeAdware, soro usoro ndị a:
Ntụpụ ụkwụ 1: Jiri Malwarebytes kawepu RuntimeBroker.exeTrojan.
Ntụpụ ụkwụ 2: Jiri HitmanPro ka ianomi maka Malware na-achọghị Mmemme.
Ntụpụ ụkwụ 3: Ugboro abụọ-ego maka obi mmemme na Emsisoft Mberede Kit.
Jul 20 2017.
Gini mere RuntimeBroker exe ji emechi PC?
Nsogbu 5 -Oge ezumike.exe ShutdownSistemụ
Ọfọn, ọ dịghị isi ihe na-akpata ụdị a nke Malitegharịa ekwentị mere ruru kaOge ezumikeBroker.exesitere na akpaakaWindowsMmelite. Yabụ, ịkwesịrị ịhazi nhọrọ akpaaka-ịmalitegharịa.
Kedu ihe kpatara ozi njehie na runtimebroker.exe?
Daalụ maka nzaghachi gị. The njehie ozi: RuntimeBroker.exe - Ngwa Error nwere ike ịbụ n'ihi na a rụrụ arụ Windows usoro faịlụ. N'ikwu ya, ịnwalela usoro mmezi nke Rohn007 nyere. Njikọ niile o nyere nwere ike inye aka dozie esemokwu ị na-enwe mgbe imeghe Ntọala.
Kedu ka m ga-esi weghachite faịlụ runtimebroker.exe?
Soro usoro ndị dị na Wizard Sistem iji họrọ ebe dị mkpa weghachite. Weghachite kọmputa gị na ihe oyiyi ndabere. Ọ bụrụ na Nzọụkwụ 1 enweghị ike idozi njehie RuntimeBroker.exe, biko gaa na Nzọụkwụ 2 n'okpuru. Nzọụkwụ 2: Gbaa SFC (System File Checker) iji weghachite faịlụ RuntimeBroker.exe rụrụ arụ ma ọ bụ na-efu efu.
Kedu nke kachasị ọhụrụ nke oge azụmaahịa?
Dị ka faịlụ Ọsọ ahịa Broker, e mepụtara ya maka Microsoft® Windows® Sistemụ arụmọrụ site na Microsoft. Ntọhapụ nke RuntimeBroker.exe nke ewepụtara maka Windows bụ na 08/01/2012 na Windows 8. filedị faịlụ kachasị ọhụrụ maka Windows 10 bụ v10.0.15063.0 (WinBuild.160101.0800) wepụtara na 07/29/2015.
Kedu mgbe nsogbu nke onye na-ere ahịa Metro na-amalite?
Kemgbe olee mgbe okwu a malitere igosi? Oge ahia Broker bụ ọrụ maka ịlele ma ọ bụrụ na ngwa ngwa Metro na-ekwupụta ikikere ya niile (dịka ịnweta foto gị) ma gwa onye ọrụ ahụ ka akwadoro ya ma ọ bụ na anaghị anabata ya.